“Waxaan doonayaa inaan qaado tallaabada xigta” – Granit Xhaka oo qirtay inuu ka tagayo Arsenal – Gool FM
“Waxaan doonayaa inaan qaado tallaabada xigta” – Granit Xhaka oo qirtay inuu ka tagayo Arsenal
Haaruun March 23, 2019
(London) 23 Maarso 2019. Laacibka khadka dhexe ee kooxda Arsenal, Granit Xhaka ayaa shaaca ka qaaday inuu suuqa xagaagan kooxda ka tagi karo isagoo qirtay inuu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo kale oo xirfaddiisa ciyaareed ah.
Xhaka ayaa xubin muhiim ah ka noqday safka koowaad ee macallin Unai Emery kal ciyaareedkan, waxaana uu ka maqnaa kaliya shan kulan oo horyaalka Premier League ah xilli ciyaareedkan.
26-sano jirkaan ayaa si joogta ah loo dhaleeceeyay intii uu joogay horyaalka Premier League, laakiin qaab ciyaareedkiisa khadka dhexe ee Arsenal xilli ciyaareedkaan ayaa aad loo ammaanay.
Yeelkeede, xiddiga xulka qaranka Switzerland ayaa sharraxaad ka bixiyey hammiga uu u hayo Arsenal, iyadoo Gunners ay dooneyso inay ku dhameysato afarta kooxood ee ugu sarreeya horyaalka, waxaana uu soo jeediyay inuu diyaar u yahay inuu ka tago garoonka Emirates.
“Anigu waxaan leeyahay hammi weyn, waxaan doonayaa inaan qaado tallaabadeyda xigta, Arsenal ma’ahan inay ahaato tallaabadayda ugu dambeysa.” ayuu Xhaka u sheegay Tagblatt.
Xhaka ayaa ku soo biiray kooxda Arsenal sanadkii 2016-kii, waxaana uu tan iyo markaas u saftay 125 kulan.
Jariiradda The Telegraph oo shaacisay haddii uu Ander Herrera doonayo inuu ku biiro kooxda Paris Saint-Germain
Romelu Lukaku oo la shaaciyey inuu dhaawac kaga maqnaanayo xulka Belgium kulanka Habeen dambe